मानिसको जीवनमा ध्यान किन महत्त्वपूर्ण छ ?
सबै किसिमका आराम र सुख–सुविधाहरू भएपनि किन मानिसहरू खालीपन महसुस गर्छन्, किन असन्तुष्ट रहन्छन् ? यस लेखमा सद्‌गुरु यो बुझाउँदै हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आफ्ना सीमाहरूबाट पर जानु हो— यही कुराले मानिसको जीवनमा ध्यान महत्त्वपूर्ण भएको छ ।
सद्‌गुरु: ध्यान भनेको भौतिक शरीर र मनका सीमाहरूबाट पर जानु हो । जब तपाईं शरीर र मनको सीमितताबाट पर जानुहुन्छ, तबमात्र तपाईंले आफूभित्र जीवनको पूर्ण आयाम पाउनुहुनेछ ।
तपाईंको शरीर तपाईंले खानुभएको खानाको रास हो । तपाईंको मन तपाईंले बाहिरबाट जम्मा गर्नुभएको विभिन्न प्रभाव र छापहरूको डङ्गुर हो ।
जब तपाईं आफूलाई शरीर ठान्नुहुन्छ, तब जीवनप्रति तपाईंको पूरै दृष्टिकोण जीविकोपार्जन गर्नेमा मात्रै केन्द्रित हुनेछ । जब तपाईं आफूलाई मन ठान्नुहुन्छ, तपाईंको सम्पूर्ण बुझाइ परिवार, धर्म र समाजको दृष्टिकोणको दास बन्दछ । तपाईं त्योभन्दा पर देख्न सक्नुहुन्न । तपाईं आफ्नो मनका विभिन्न रूपहरूबाट स्वतन्त्र बनेपछि मात्र, तपाईंले भौतिकभन्दा परको आयामलाई जान्नुहुनेछ ।
तपाईंले जे जम्मा गर्नुभएको छ, त्यो तपाईंको सम्पत्ति हुन सक्छ । तपाईंसँग घर र बैँक ब्यालेन्स भए जस्तै तपाईंसँग शरीर र मन छ । राम्रो जीवन बाँच्नको लागि राम्रो बैँक ब्यालेन्स, राम्रो शरीर अनि राम्रो मन आवश्यक हुन्छन्, तर ती पर्याप्त हुँदैनन् । कुनै पनि मानिस यी कुराहरूबाट सन्तुष्ट रहन सक्दैन । यी कुराहरूले जीवनलाई केवल सहज र आरामदायक बनाउन सक्छन् । एउटा पिँढीको रूपमा हेर्ने हो भने, हामी अघिका पिँढीहरूले यस स्तरको आराम अनि सुख–सुविधाहरूको कल्पना समेत गर्न सक्दैनथे, जुन हामीसँग अहिले छ । तर दुर्भाग्यवश, हामी आफूलाई यस धरतीको सबैभन्दा आनन्दित र स्नेही पिँढी भनेर दाबी गर्न सक्दैनौँ ।
ध्यान— शरीर र मनबाट पर जाने वैज्ञानिक साधन
मनुष्य हुनुको गुण नै यही हो— जति छ, त्योभन्दा बढी चाहनु ।
प्रश्न: सद्‌गुरु, के हामी कुनै यज्ञ वा अनुष्ठानको प्रयोग गरेर असीमित आयामसम्म पुग्न सक्दैनौँ ? के ध्यान नै एकमात्र तरिका हो ?
सद्‌गुरु: यहाँ ईशामा, हामीले ध्यानको प्रक्रियालाई रोजेर अनुष्ठानको प्रक्रियालाई न्यून राखेका छौँ, किनकि ध्यान अलग्गै गरिने प्रक्रिया हो । आधुनिक समाज यस्तो हुनुको मूल कारण भनेको अलग्गै हुन खोज्नु हो । जति बढी मानिसहरू आधुनिक शिक्षामार्फत शिक्षित बनिरहेका छन्, त्यति बढी उनीहरू अलग–थलग भइरहेका छन् । मानिसहरूको अवस्था यस्तो हुँदै गएको छ कि दुईजना व्यक्तिहरू एउटै घरमा सँगै बस्न नसक्ने भएका छन् ।
आधुनिक शिक्षा मूलत: अलग–अलग गरेर हेर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, जबकि सम्पूर्ण अस्तित्व सबैलाई समावेश गर्ने प्रक्रिया हो ।
आज पनि दक्षिण भारतमा केही यस्ता परिवारहरू छन्, जहाँ एउटै घरमा ४०० जनाभन्दा बढी सदस्यहरू सँगै बसोबास गर्छन्— आमा–बुबा, दाजु–भाउजू, काका–काकी, हजुरबुबा–हजुरआमा अनि अरू थुप्रै सदस्यहरू सहितको विशाल परिवार । परिवारमा एकजना व्यक्ति प्रमुख हुने गर्छन् अनि बाँकी सबैजनाको आ–आफ्नो भूमिका हुन्छ । कम्तीमा पनि ७०–८० जना बच्चाहरू एउटै घरमा हुन्छन् । सम्भवत: बच्चाहरू निश्चित उमेरसम्म नपुगुन्जेल उनीहरूलाई आफ्ना आमाबुबा को हुन् भन्नेसमेत थाहा हुँदैन, किनकि घरमा लगभग ८–१० जना महिलाहरूले उनीहरूको राम्रो हेरचाह गरिरहेका हुन्छन् । १२–१३ वर्षको नहुँदासम्म बच्चाहरूले आफूलाई जन्म दिने आमाबुबालाई सायद राम्रोसँग चिन्न पनि सक्दैनन् । उनीहरूलाई थाहा भएपनि, आफ्नो मनमा त्यस प्रकारको विचार बनाउने नहुँदासम्म उनीहरू सही ढङ्गले घुलमिल हुन सक्दैनन् ।
तर, जसै आधुनिक शिक्षा चारैतिर फैलिएको छ, अधिकांश मानिसहरू एकसाथ रहन नसक्ने भएका छन् । यहाँसम्म कि दुईजना व्यक्तिहरू पनि सँगै रहन नसक्ने भएका छन् । यो स्थिति एकदमै छिटो फैलिरहेको छ । यस्तो हुनुको कारण के हो भने, आधुनिक शिक्षा मूलत: अलग–अलग गरेर हेर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, जबकि सम्पूर्ण अस्तित्व सबैलाई समावेश गर्ने प्रक्रिया हो ।
ध्यान— अलग्ग हुनेबाट समावेश गर्नेतर्फ
प्रक्रियाको दृष्टिले हेर्दा ध्यान अलग्गै रहने जस्तो देखिन्छ, तर यसले विस्तारै समावेश गर्नेतर्फ डोहोऱ्याउँछ । तर, जब तपाईं शुरु गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्ना आँखा बन्द गरेर बस्नुहुन्छ । जो व्यक्तिहरू आध्यात्मिक मार्गको शुरुवाती चरणमा हुन्छन्, उनीहरू एकदमै एकान्तिक बन्छन् वा अलग्गै रहन्छन्— उनीहरू अरूसँग घुलमिल हुनै सक्दैनन् । मेरो विचारमा थुप्रै मानिसहरूमा यो डर हुने गर्दछ, "यदि मैले आध्यात्मिक मार्ग रोजेँ भने, म समाजमा घुलमिल हुन सक्दिनँ होला ।" यस्तो किन हुन्छ भने, यो मूलत: एकान्तिक हुन्छ ।
ध्यानको प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्न सकिँदैन, किनकि यो व्यक्तिपरक हुन्छ अनि अलग्गै गरिन्छ ।
यदि परिस्थिति यस्तो छ, जहाँ "तपाईं विरुद्ध म" चलिरहेको छ भने अनुष्डान गर्न सकिँदैन । त्यस स्थितिमा अनुष्ठान भद्दा र खराब प्रकिया बन्दछ । जब पूर्ण रूपमा समावेश गर्ने वातावरण हुन्छ, अनुष्ठान उत्तम प्रक्रिया बन्दछ । तर, अहिले संसारमा त्यस्तो समावेशी वातावरण सृजना गर्नु असाध्यै कठिन छ, अनि केही समुदायहरूमा मात्रै कायम छ । बाँकी सबै अलग–थलग बनेका छन् । त्यो सन्दर्भमा, मानिसहरूको जीवनमा ध्यान निकै महत्त्वपूर्ण छ ।